Manao ny Tsara ny Naman’Andriamanitra
Raha tianao ny toetran’ny namanao, dia miezaka ho toa azy ianao. “Tsara sy mahitsy Jehovah”, hoy ny Baiboly. (Salamo 25:8) Tokony ho tsara toetra sy hanao izay mahitsy koa isika, mba ho naman’Andriamanitra. Hoy koa ny Baiboly: “Aoka hanahaka an’Andriamanitra ianareo, amin’ny maha zanaka malala anareo. Ary mandehana mandrakariva amin’ny fitiavana.” (Efesianina 5:1, 2) Ireto misy fomba azo ampiharana izany:
Ampio ny hafa. “Aoka isika hanao soa amin’ny rehetra.”—Galatianina 6:10.
Mazotoa miasa. “Aoka ny mpangalatra tsy hangalatra intsony, fa aoka kosa izy hiasa mafy, ka hampiasa ny tanany hanaovana asa tsara.”—Efesianina 4:28.
Mila madio isika. Tokony ho tsara koa ny fitondran-tena. “Aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin’ny zava-drehetra mandoto ny nofo sy ny fanahy, ka hanao izay hahatonga lafatra ny fahamasinana ao amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra.”—2 Korintianina 7:1.
Tiavo sy hajao ny fianakavianao. ‘Aoka ny lehilahy tsirairay ho tia ny vadiny tahaka ny tenany, ary aoka kosa ny vehivavy hanaja fatratra ny vadiny. Ianareo zanaka, ankatoavy ny ray aman-dreninareo.’—Efesianina 5:33–6:1.
Manehoa fitiavana. “Aoka isika hifankatia hatrany, satria avy amin’Andriamanitra ny fitiavana.”—1 Jaona 4:7.
Ankatoavy ny lalàna eo amin’ny tany misy anao. “Aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny [fanjakana] ... Aloavy amin’izy rehetra àry izay tokony ho azy avy: Ny hetra ho an’izay mitaky hetra.”—Romanina 13:1, 7.